2014-08-10 ~ မြန်မာမိုဘိုင်းနည်းပညာ
Home » Archives for 2014-08-10
ကွန်ပျူတာက Download Manager မှာ ဆွဲထားတဲ့ဖိုင်တွေ Resume မရပါက ရအောင်လုပ်နည်း
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ........................
ဒီနေ့ PC က IDM မှာ ဆွဲထားတဲ့ဖိုင်တွေ
Resume Download လုပ်လို့မရတော့တဲ့အခါ
လုပ်ချင်တဲ့ ဖုိုင်ဆီကို Download Manager
ဖိုင်ကို ထောက် Right Click >>>>>
Reflesh download adress ဆိုတာလေးကို
Broswer ကနေ သွားနေပါလိမ့်မယ်
ခဏလေးစောင့်ပါ အဲ့မှာ အရင်ဆွဲထားတဲ့
ဖိုင်ဆီရောက်သွားရင် Download အသစ်
ထပ်ဆွဲပါ IDM နဲ့ ပဲပြန်ဆွဲနော်
0k ဆွဲနေပြီဆိုရင် pause ထားပါ
Downlaod Manager ဆီပြန်သွား ဆွဲနေတဲ့
အသစ်ပေါ်မှာ Right Click >>>>>
ပြီးရင် အနီနဲ့ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ Link တွေ
အကုန်လုံးကို Copy လုပ်ပါ ။ ok ပြီးရင်
အရင် Resume လုပ်မရတဲ့ဖိုင်ကိုသွား
Right Click >>>>> Properties
လင့်တွေအားလုံး Paste လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် ok ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်အဲ့ဖိုင်
ကို Resume လုပ်လိုက်ပါ။
အဲ့ဒါဆို ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုဒ်ကြီးကြီး
အဆင်ပြေမယ်မလား The Avengers
Youtube ပေါ်က Video တွေ ဘာ Download Manger မှ မသုံးဘဲ အလွယ်ဒေါင်းနည်း။
ဒီနေ့တော့ ပိုက်ဆံနည်းနည်းဖြုန်းချင်တာနဲ့ Youtube ပေါ်တက်ပြီး Hot ဖြစ်နေတဲ့ video တွေ ဒေါင်းမလို့ဗျာ
IDM ကတော့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် IDM က တစ်ချို့ Video ဆွေဆို download မပေးဘူးဗျာ….
အဲ့ဒါနဲ့ လက်ကမြင်းပါလေရော။ အဲ့မှာ ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ ဘာ ဆော့ဝဲမှ မလိုဘဲ Youtube ပေါ်က video
တွေကို ဒေါင်းလို့ရအောင် လုပ်မယ် ပေါ့ဗျာ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ??????.
ပထမဦးဆုံး သားတို့ youtube ပေါ်က ကိုယ်ဒေါင်းချင်တဲ့ Video တွေဆီအရင် သွားလိုက်ပါ။
ရောက်ပြီဆိုရင် သား ၀ိုင်းပြထားတဲ့ လင့်ကို ကြည့်ပါ ။ www.youtube.com xxxxx ပေါ့ အဲ့မှာ (www.)နေရာကို (ss) အစားထိုးပေးလိုက်ပါ အောက်ကပုံအတိုင်းနော်
Enter ခေါက်ပါ ။ ခဏလေးစောင့်ပါ ။အဲ့မှာ တခြားလင့်ကနေ box တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ် /
အဲ့လိုလေး ပေါ်လာရင်တော့ အရင်ဆုံး download ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပါ။ Generate လုပ်နေတုန်း ခဏလေးစောင့်ပါ။ ပြီးသွားရင် အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
အဲ့မှာ Mp4 ရယ် more ဆိုတာလေး ပါလိမ့်မယ် MP4 ဆိုတာလေးနှိမ့်လိုက်ရင် တော့ Mp4 Format နဲ့ ဒေါင်းပါလိမ့်မယ် ၊ ကိုယ်ကတခြား Format နဲ့ ဒေါင်းချင်ရင်တော့ More ဆိုတာလေး နှိမ့်ပြီး ကြိုက်တာနဲ့ ဒေါင်းနှိင်ပါ တယ် (မသိသောသူများအတွက်ပါ p အများဆုံးကတော့ Resolution ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံးပါ ) ဖုန်းနဲ့လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ၊ ဖုန်းနဲ့ ဆွဲချင်သူများအတွက် PDf ထုပ်ထားပေးတာပါ။ Offline ဖတ်လို့ရတာပေါ့
Download Pdf; (1.16) MB